၁။ ဆရာ နှလုံးကြီးတဲ့ရောဂါနဲ့ပတ်သတ်တာလေး တင်ပေးပါနော် ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်လေးပါ သမီးအသက်ငယ်ငယ်နဲ့ အဲ့ရောဂါဖြစ်နေတာ ဒီနေ့မှာသိ့လိုက်ရတော့ သမီးအရမ်းကြောက်နေလို့ပါ ဆရာကျေးဇူးပြု၍တင်ပေးပါနော် မတည့်တဲ့ အစားအသောက်လဲ သိ့ချင်ပါတယ်ဆရာ
သမီးအသက်ငယ်ငယ်ဆိုသူ အသက် မသိ။ အရွယ်ရောက်ဆိုရင် ရာသီ-အိမ်ထောင်ရေး-ကိုယ်ဝန်-ကလေး မသိ။ ဘလော့မှာ ဖတ်လိုက ဖတ်နိုင်။
၂။ ကျွန်တော့်ကောင်မလေး အသက်က ၂၀ပါဆရာ။ သူမှာနှလုံးရောဂါရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ မွေးရာပါ မဟုတ်ဘူးဆရာ။ သူက ၈တန်းစားမေးပွဲဖြေခါနီးမှာ နေ့ည စာဖတ်ပါတယ်။ အိပ်ချိန်မမှန်ဘူးဆရာ။ ကော်ဖီမစ်သောက်လားမေးတော့ သောက်တယ်တဲ့ အိပ်ချိန်အတိအကျ မရှိဘူးတဲ့။ ရင်တုန်လာတယ်တဲ အဲ့လိုနဲ့ စာမေးပွဲဖြေခါနီး တလအလိုမှာ စာသင်ခန်းမှာ မူးလည်းလို့ ဆေးရုံပါတက်ရတယ်။ နောက်တော့ စာမေးပွဲမဖြေရဘဲ ကျောင်းထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ ခဏခဏမေ့လဲ အခုဆေးသောက်နေရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဆေးနာမည်က မပြောပြဘူးဆရာ။ အခုနောက်ပိုင်း တွေ့ကြုံရတာကတော့ ရင်ဘတ်အောင့်တယ်။ ပြီးရင် အသက်ရှုမဝဘဲ ကြပ်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာ။ သူရဲ့ရောဂါက နှလုံးရောဂါလို့ပြောတယ်ဆရာ။ ကျွန်တော်သိချင်တာက နှလုံးဘယ်နေရာကို ထိခိုက်နေလည်းဆိုတာပါဆရာ ဆေးဘဲသောက်ရင် အဆင်ပြေပါ့မလားဆရာ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရလားဆရာ။ သူအတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးရင် အဆင်ပြေနိုင်မလဲဆရာ။
စမ်းသပ် + စစ်ဆေးမှသာ သိပါမယ်။
၃။ သမီးရဲ့သားလေးက အသက် ၄ လ ၆ ရက်ရှိပါပြီ။ နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးနဲ့ပြခဲ့ပါတယ်။ သားမှာ မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါဖြစ်နေပါတယ်တဲ့။ ခုတော့ သောက်ဆေးပေးထားပါတယ်ဆရာ။ ငွေကြေးတက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘန်ကောက်-အိန္ဒိယ-မလေးမှာတော့ ခွဲစိတ်ကုသနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာ။ တက်နိုင်လို့သွားဖို့ဆို့ရင်တောင် စဉ်းစားရအုံးမှာပါရှင့်။ သမီးရဲ့သားလေးအရမ်းငယ်သေးလို့ပါဆရာ။ နှလုံးရောဂါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် ကျန်းမာအောင်ပြုစုနည်းလေးများအား ပြောပြပေးစေလိုပါသည်။ သားရဲ့ပုံစံကလန်းပါသည် မျက်နှာမငြိုးပါ။ အသက်ရှုလျှင်တော့ နဲနဲမြန်ပြီးရှုပါသည်။ သမီးသားလေးအတွက် ဝမ်းနည်းစွာခံစားနေရပါတယ်ဆရာ။ လေးစားစွာဖြင့် ကျေးဇူးတင်လျှက်။
၄။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါကို ပျောက်အောင်ကုလို့ရလားဆရာ။ မိန်းကလေးပါ။ အသက် ၂၂။
၅။ နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်လို့ပါဆရာ။ နှလုံးရဲ့အခန်းတွေနဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ နှလုံးရောဂါမဖြစ်ခင်နဲ့ဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်ကုသရလဲ။ သွေးတိုးရောဂါနဲ့နှလုံးရောဂါက ဆက်စပ်နေပါသလားဆရာ။ နှလုံးရောဂါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲက ဘာတွေဖြစ်တတ်ပါသလဲဆိုတာ ဖြေကြားပေးပါဆရာ။
၆။ ဆရာခင်များ ကျနော်အမည့့် ပါ။ အသက် ၃၆။့့ မှာနေပါတယ်။ အရင်လက chest pain ဖြစ်အသက်ရှုကျပ်လို့ ဆေးရုံတက်ရပါတယ်။ နှလုံးကြီး နှလုံးနံရံထူတဲ့ post လေးရေးဖူးရင် ပြန်ရှယ်ပေးပါဦးဆရာ။ ရှာတာမတွေ့လို့။
၇။ မင်္ဂလာပါ ဆရာခင်ဗျား။ ရန်ကုန်မြို့ကလားခင်ဗျား။ နှလုံးရောဂါကို အမြစ်ပြတ်အောင်ကုသလို့ရပါသလားခင်ဗျား။ အရမ်းပဲအရေးကြီးတဲ့ လူနာတယောက်ရှိနေလို့ပါ။ ကျွန်တော်က မြိတ်ကပါ။ ဆရာအားလို့ရှိရင်စာပြန်ပေးပါခင်ဗျား။
2. ASD (1) နှလုံးအပေါက် (၁) https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/atrial-septal-defects-asd.html
5. CPR နှလုံး-အဆုပ် ပြန်လည်အလုပ်လုပ်စေရန်ပြုစုနည်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/cpr.html
11. Heart disease (2) နှလုံးရောဂါ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/heart-disease-2.html
13. IHD နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/ihd.html
14. Ischemic Heart Disease နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/ischemic-heart-disease.html
15. Mitral valve prolapse နှလုံးအဆို့ရှင် ကျွံခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/09/mitral-valve-prolapse.html
16. Myocardial ischemia နှလုံးသား သွေးမဝခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/10/myocardial-ischemia.html
17. Triglycerides (ထရိုင်ဂလစ်စရိုက်) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/triglycerides.html
18. Valvular heart disease နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/09/valvular-heart-disease.html
19. Viagra in Heart Disease နှလုံးရောဂါ နဲ့ (ဗိုင်ယာဂရာ) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/viagra-in-heart-disease.html
20. ASD (1) နှလုံးအပေါက် (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/atrial-septal-defects-asd.html
21. Human Heart လူ့နှလုံး http://doctortintswe.blogspot.com/2016/08/human-heart.html